Xaflad Deeqo Jibriil ugu mahadcelinasay Taageerayaasheeda kuna taageertay mesharaxnimada Mayarka Boston Martin Walsh. |
Xaflad Deeqo Jibriil ugu mahadcelinasay Taageerayaasheeda kuna taageertay mesharaxnimada Mayarka Boston Martin Walsh.
Boston, Oct 29, 2017 (Ceegaag) Waxaa Xalay ka dhacday xarunta Eriteriyaanka Boston xaflad aad u balaadhnayd aadna loosoo agaasimay oo Deeqo Jibriil ku taageertay duqa magaalada Boston inuu afar sano oo danbe sii hayo jagada Mayornimo dhinaca kalena ay ugu mahad celinasay taageerayaasheedii sida aadka ah ugu ololeeyay musharaxnimadeedii xildhibaan magaalnimo ee Boston.
Xaflada ayaa waxaa daadihinayay Shariif Maxamed Idris isaga oo ku furay xaflada Ayaadaha Quraanka Kariimka Daawo.
Waxaa turjumay Aayadaha kana hadlay muhiimada ay leedahay in dadku mideeyaan muruqooda maalkooda iyo maskaxdooda si ay wax u noqdaan Professor Xuseen Dayib oo ah madaxa danaha dadwaynaha ee Boston Water and Sewer Commissioner.
Proffesoorka ayaa ka hadlay waxyaabaha uu Mayarku u qabtay jaaliyada Soomaalida Boston sida uu uga hor yimid in dawlada dhexe takoorto socdaalka Soomaalidu usoo socdaalayaan Maraykanka, Gabadh Soomaaliya oo lagu xanibay Madaarka inuu u tagay oo kasoo damiintay, sida uu u doonayo inuu wax ula qabto dhamaan shacabka ku dhaqan magaalada Boston, dhinaca kalena waxa uu u mahad celiyay Deeqo jibriil isaga oo uga mahad celiyay tartankii ay u gashay inay ku biirto xildhibaanada Magaalada Boston. Daawo.
Waxaa madasha la wareegay Deeqo Jibriil oo hore u ahayd Musharax Boston City Council, District 7 iyada oo xustay taariikhda Soomaalida Boston sidii ay ahaan jireen iyo sida ay hada yihiin. Waxayaabihii ay ka badashay Musharaxnimadeedii Xildhibaanimo iyo waxqabadka xaafada Roxbury ee Duqamagaalada Boston Martin Walsh.
Deeqo ayaa sidoo kale u mahad celisay taageerayaasheedii sida wayn u garab istaagay, waxayna ku boorisay in lasoo baxo maalinta codaynta Nov 07, 2017 si muglehna loogu codeeyo Duqa magaalada Boston Martin Walsh iyo City Consular at Large Mickle Flaherty.
Deeqo ayaa mid mid ugu yeedhay Xidhibaanka Gobolka Elizabeth A. Malia Democrat – 11th Suffolk, City Consular at Large Mickle Flaherty and the Mayoy of Boston Martin Walsh.
Deeqo ayaa madasha kusoo dhaweesay Xildhibaanka Gobolka Elizabeth A. Malia Democrat – 11th Suffolk oo iyadu si wayn u garab istaagtay Deeqo albaabo badana u furtay. Haweenaydan ayaa ah mid aad ugu ololaysa xuquuqda dumarka iyada oo ilaa 1998 hogoonka u haysay dhaqdhaqaaqa Haweenku ku raadinayaan inay xuquuda raga oo kale yeeshaan.
Xildhibaan Liz ayaa ku guubaabisay Deeqo Jibriil hadii lagaaga adkaaday tartanka in aad wali ka rajo dhigin siyaasada tasoo ah macnaha maraykannimo. Sidoo kale waxay ku amaantay duqamagaalada Boston Martin Walsh sida uu u garab istaagay dadka qaxootinimada ku yimid wadankan Maraykanka kuwaasoo uu amar ku bixiyay inaan laga tarxiili Karin Magaalada Boston. Ugu danbayn waxay u mahad celisay Deeqo oo ay kula dardaarantay inaysan ka daalin dadaalkeeda iyo damaceeda siyaasadeed. Daawo
Xildhibaan Magaaleedka guud ee Boston Mickle Flaherty ayaa madasha lagu soo dhaweeyay kadib waxa uu ku bilaabay hadalkiisii su’aal uu iswaydiiyay oo ahayd ‘sidee isugu qeexdaa shaqsiga aan ahay jaaliyada Soomaalida Boston’. Xildhibaanka oo laga soo doorto magaalada oo dhan (City Consular at Large) loogana codeeyo xaafad walba sidoo kalena ah musharax u taagan inuu sii hayo jagadiisaa ayaa ka hadlay sida ay u siin jireen qado maalin walba markii uu ardayga ahaa ee uu u shaqeen jiray hodheelka Anthony’s Pier 4 oo kamida ah kuwa ugu qaalisan ee magaalada.
Sidoo kale waxa uu sheegay uu caawiyay wiil dhalinyaro Soomaaliya oo faldanbiyeed uusan galin lagu soo oogay, waxaa kale oo uu sheegay inuu caawiyay jaaliyada Islaamka xiriir fiicana uu la leeyahay. Waxa uu sheegay in duqa magaaladu uu jecel yahay inuu caawiyo jaaliyadaha ku cusub wadankan Maraykanka sida Soomaalida ayna hawlo badan kawada shaqeeyeen. Daawo
Ugu danbayn waxaa goobta lagu soo dhaweeyay Duqa magaalada Boston Martin J Walsh isaga oo u mahad celiyay Jaaliyada Soomaalida, Xidhibaanka Gobolka Elizabeth Malia iyo Xildhibaan Magaaleedka guud ee Boston Mickle Flaherty.
Mayarka ayaa ka hadlay taariikhda Maraykanka iyo sidii jaaliyadaha kolba ku cusub loola dhaqmi jiray sida qawmiyada Irishka, Talyaaniga, iyo Yuhuuda. Isaga oo sheegay inuu aad uga xunyahay wararka caasimadeena ka imanaya, kuwaaso xanbaarsan nacayb ku wajahan soogalootiga iyo dadka haysta diinta Islaamka, arintaasoo aan loo baahnayn ayuu yidhi duqa magaalada Boston.
Magaalada Boston waa magaalo taariikhi ah, waxaa kunool dad ka kala yimid daafaha aduunka aniga waalidkay waxay ka yimaadeen Irland 1950 meedkii, ma jirto cid ilaa hada igu qabsatay jidadka ama shirarka oo igu eedaysay maxaad u taageerasaa dadka soo galootiga ah. Tasoo tusaale dhab ah u ah, sida ay dadka reer Boston uga go’an tahay inay muujiyaad midnimadooda iyo walaaltinimadooda.
Mayarka oo hadalka sii wata ayaa tusaale usoo qaatay dadkii madasha fadhiyay isaga oo yidhi ‘waxa kaliya ee aynu kawada mideesan nahay waa in la helo Guryan, Shaqaalay, Iskuulo tayo leh, iyo Caafimaad ay dadku iska bixin karaan.
Waxaan idiin balan qaadaya inaan magaaladan dadkeeda u dhexeeyo iskuna taxaluujiyo inaan qofwalba oo magaaladan degan uu helo waxyaabaha nolosha biniaadamka ishtimaaci ahaan u baahan yahay. Aniga wax macno ah iima samaynaso qofku meesha uu ka yimid balse waxaa muhiim ii ah in qofkasta oo magaaladan degan loo diyaariyo mustaqbalka dalkeena waayo wuxuu shaqsigaasi noqon karaa hogaamiyaha dalkeena heer degmo ilaa heer madaxwayne.
Wuxuu aad u amaanay Deeqo jibriil kuna bogaadiyay dadaalkeeda ay ugu xusul duuban tahay inay Soomaalida soo saarto. Daawo
Sawidaii iyo Qudbadiihii kale ee Madashaa Daawo